Njem ụgbọ oloko na-adị mma ma na-Eco-Friendly Way To Travel. nkena-isiokwu e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, Tiketi ụgbọ oloko dị ọnụ ala Weebụsaịtị N’ Thewa.
Foto ndị dị na ntanetị a anaghị eme ihe ekwesịrị anwansi Cinque Terre mpaghara na .tali. Lọ ndị mara mma dị n’elu ugwu, gbara ubi-vine gburugburu, ụlọ oriri na ọ localụ localụ obodo, na hiking ụzọ ụkwụ, niile na-eme ka mpaghara a bụrụ njem njem ọdịda dị ịtụnanya na Europe. Cinque Terre mejupụtara n'ezie 8 obodo nta na okporo igwe na-ejikọ ha niile na ibe ha. Nke a na - eme ka ọ dị mfe ileta obodo niile 2-3 ụbọchị ma ọ bụrụ na ị bụ mkpụmkpụ oge. Kedu ihe ga - akacha mma karịa ịmịnye mmadụ ọzụzụ na otu n'ime ebe kachasị mma na Europe ọdịda?
Oldlọ Marktplatz Old Town na ụlọ elu elekere bụ nnukwu ebe mbido ịchọpụta ihe owuwu ndị Gothic. Can nwere ike ịga n’ihu n’ Townlọ Nzukọ Obodo New, nnukwute ulo-elu dị ka mmiri na-anọ na ya. Ala ndị ahịhịa ndụ na osisi gbara ndụ gburugburu nnukwu obí ma mejupụta ikuku dị ebube ma na-ele ya na agba ọla edo.
Hannover bụ otu n'ime ihe bara nnukwu uru nke Germany na enweghị ike ịme ka ọ dị ọdịda. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ maka ezumike ọdịda anyanwụ na Europe, mgbe ahụ Hannover bụ ezigbo njem njem. Ọ bụghị ọtụtụ ndị njem nleta achọpụtala anwansi ya, ka, could nwere ike ịbụ onye mbụ nwere oge ndụ gị n’obodo.
Ndagwurugwu Rissbachtal na Karwendel Alpine Park, bụ njem dị egwu na Austria maka ezumike ụbịa. Ala Alpine nke Ahornboden nwere 2,000 afọ Sycamore-Maple osisi na-achọ pụtara na ha n'oge mgbụsị akwụkwọ ekike nke ọla edo na oroma. Nature na ugwu na-emeputa ihe nlere zuru oke maka njem njem echefu echefu echefu na Europe.
Ubi na ọtụtụ ebe a na-ahụ anya na-enye echiche na-atọ ụtọ maka obodo ahụ dum na ndị gbara ya gburugburu. N'oge mgbụsị akwụkwọ echiche ndị mara mma nke ukwuu n'oge mgbụsị akwụkwọ agba. Ya mere, ebe Luxembourg bụ obere obodo na Europe, ọ dị mpako n'akụkụ obodo ukwu ndị mepere emepe dị ka Paris. O doro anya na ịhọrọ Luxembourg maka ezumike gị na Europe n'oge ọdịda.
Ekele dịrị ndị ọrụ ụzọ dị elu, can nwere ike ịga ebe ọ bụla na Europe n'oge. Site na nnukwu obodo mepere emepe ruo na obere obodo ahụ dị oke egwu, obodo obula na anyi 10 obodo kachasị mma maka ezumike ọdịda na Europe, has its unique charm and magic.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Oge Ezumike Ọhụụ Kachasị mma na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-fall-vacations-europe/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)